Xeeladaha haddii Aad cid la Wadaagayso Meesha aad ku Nooshahay | Tips if You Share Living Space (Somali) | Multnomah County
Xeeladaha haddii Aad cid la Wadaagayso Meesha aad ku Nooshahay | Tips if You Share Living Space (Somali)
In badan oo inaga naga mid ah waxay la nool yihiin qoys fara badan, saaxiibo, ama kuwo aan qol isla degenahay hal guri, ama waxaan la noolnahay caruur, waalidkeen waalidkiis iyo waalidiinteen.
Dadka da`doodu ka weyntahay 65, ama qof kasta oo qaba cudurrada sanbabka, cudurrada wadnaha, dhiig-karka, neefta, sonkorta waxa ay khatar fara badan ugu jiraan in ay la xanuunsadaan COVID-19. Haddii qof guriga ku nool uu yahay qof nugul, qofkasta waa in uu qaataa taxaddar dheeri ah si ay uga fogaadaan in ay xanuunsadaan si loo ilaaliyo kuwaas.
Waa kuwaan xeeladaha qaar ku saabsan sidii aan caafimaad ugu joogi lahayn, anagoo wada joogna.
Tilaabooyinka ay tahay in la qaado maalin kasta
Gacmaha si joogto ah ugu dhaq biyo iyo saabuun ugu yaraan 20 ilbiriqsi.
Hubso in aad gacmaha dhaqato marka aad guriga kusoo laabato, inta aadan wax cunin, marka aad qabato shaqo nadaafadeed, iyo kaddib marka aad suuliga isticmaasho.
Qoysasku waxay gacmo dhaqashada u baddali karaan ciyaar ayakoo ku heesaya hees 20 ilbiriqsi ah si wadajir ah marka ay gacmaha dhaqanayaan.
Ha ku taaban indhahaaga, sankaaga, ama afkaaga gacmo aan la dhaqin.
Isticmaal tiish marka aad qufacdo ama hindhisto, ama isticmaal xagasha suxulkaaga. Tuur tiishka aad isticmaashay kaddibna dhaq gacmahaaga.
Nadiifi oo jeermiska ka dil meelaha inta badan la taabto sida miisaska, kuraasta, qataarada albaabada, furayaasha layrka, rimuudyada, boombileyaasha, suuliyada, iyo baafafka inta badan. Marka ay macquul tahay, isticmaal galoofyada la tuuro iyo/ama dhaq gacmahaaga marka aad meelahaas nadiifiso.
Marka aad dhar dhaqayso, isticmaal biyo kulul qalajina alaabta si dhammaystiran.
Ha hurgufin dharka uskagga ah
Gacmaha dhaqo kaddib marka aad ka shaqayso dhardhaqaal uskag ah
Qorshee caafimaadka qof kasta
Qorshe u samee sida aad daryeel ku heli lahayd haddii aad xanuunsato. La wadaag qorshahaaga dadka guriga kugula nool. Ku dar magaca iyo lambarka teleefoonka dhaqtarkaaga ama isbitaalka. Ku dar macluumaadka ku saabsan dhibaato kasta oo caafimaad oo ku haysa sida neefta ama sonkorta taasoo ay kamid tahay daawada aad qaadanayso.
Qorshe u samee cidda daryeeli lahayd carruurtaada ama dadka kale ee gurigaaga jooga kuwaasoo u baahan daryeel la socosho.
Haddii aad qabto dhibaato caafimaad oo socota (xaaladaha cudurrada raaga) kuwaasoo khatar badan kuu galinaya xanuun daran, hubso in aad haysato daawo iyo sahay kugu filan lacala haddii aad u baahato in aad guriga joogto muddo dhowr todobaad ah.
Haddii aad ka shaqaynayso meel ka baxsan gurigaaga
Si qof kasta uu u noqdo mid caafimaad qaba:
Iska badal dharka iyo kabaha marka aad guriga timaado. Gacmahan dhaqo ugu yaraan 20 ilbiriqsi.
Haddii aad awooddo, u jirso 6 fuudh dadka kale ee gurigaaga jooga.
Ka fikir in qof kastaa xirto daboolka afka haddii aysan macquul ahayn in aad 6 fuudh isu jirsataan.
Haddii qof uu xanuunsado
Isku day in aad qofkaas u samayso meel u gooni ah si uu ugu nasto uguna raysto.
Haddii ay macquul tahay, sii qofka xanuunsan xamaam u gooni ah.
Haddii ay jirto kaliya hal xamaam, hubso in la nadiifiyo mar kasta oo qofka xanuunsan uu isticmaalo.
Ha wadaagina shukumaanka, sariirta, cuntada, daboolka afka ama maacuunta.
U door qof caafimaad qaba oo reerka kamid ah in uu daryeelo kan xanuunsan.
Xiro daboolka afka marka aad daryeel siinayso.
Haddii ay macquul tahay, qofka xanuunsan asna waa in uu xirtaa daboolka afka, si uu u ilaaliyo nolosha dadka kale ee la nool.